Jilciso Dabiici Ah Oo Tintaada Ka Dhigeyso Mid Dhaldhalaal Iyo Qurux Badan.. - Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: January 8, 2017, 5:29 pm
Qormadaan waxaan kusoo gudbinaynaa jilciso dabiici ah oo looga maarmi karo daawooyinka kiimikada ah ee loo adeegsado in timaha lagu jilciso kuwaas oo caafimaadka u daran.
Alaabta maanta aan idin la wadaadayno waa nafaqo timaha la marinayo. Caruurta iyo dadka waa weyba way anfacaysaa waxaana laga samaynayaa miraha flax seed oo ah nooc ka mid ah dalagyada la cuno taasoo leh faa’iido aad u weyn.
Miraha Flax seed oo af Soomaali lagu dhaho “Qoondar“ ama “Saliib” waxaa ku jiro waxyaabo faaido u leh quruxda iyo caafimaadka waxaa ka mid ah dufanka “omega 3” oo tinta u ah nafaqo culus.
Faa’iidooyinka flax seed ay u leedahiin timaha:
Mirahaan waxay tinta siiiyaan jileec, dhalaal iyo qoyaan.
Waxay kobciyaan koritaanka tinta
waxay tinta ka bi’iyaan rifrifka
Waxay tinta siiyaan nafaqo
Biyo ayaad ka karkarsanaysaa. waxaad duraysaa miraha flax seed kadibna waad waalaqaysaa. Way isku dhegdhegaysaa hadii aan la walaaqin. Haddii aad dareento inay biyaha ku yaryihiin xooga yar ayaad ku darsan kartaa. Dabka u gaabi oo ku wad walaaqa, Waxaa la rabaa inuu kasoo baxo wax sida jeelka oo kale isjiidjiidaya. . Kadibna waad miiraysaa.
Waxaad ku daraysaa saliid saytuun, almond oil iyo kareemka qumbaha ee cuntada lagu daro kadibna waad isku shiidaysaa. Tallaagada ayaad gashanaysaa marba xooga ayaad timaha marsan kartaa shaambada kadib.
W/Q Faati M. Osman